News 18 Nepal || तीजको दिन नेपाली चेली बंगलादेशसँग भिड्दै, मार्लान त बाजी ?
तीजको दिन नेपाली चेली बंगलादेशसँग भिड्दै, मार्लान त बाजी ?
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले आज (बिहीवार) बंगलादेश राष्ट्रिय महिला टोलीसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आज हरितालिका तीजको दिन नेपाली महिला टोलीले घरेलु मैदानमा डेब्यू गर्दैछ। अहिलेसम्म दशरथ रंगशालामा कुनै पनि खेल नखेलेको महिला टोली आजको खेलमा जित निकाल्ने दाउमा रहनेछ ।
नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली आफ्नो स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी उर्फ साम्बा बिना नै मैदान प्रवेश गर्नेछ । राष्ट्रिय टोलीकी सर्वाधिक गोलकर्ता साम्बा घुँडाको चोटका कारण टिम बाहिर छिन् । आज दशरथ रंगशालामा डेब्यू गर्ने पात्र रहनेछन् नेपालका मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्स । आजको खेल प्रशिक्षण गर्ने क्रममा चेलीको टोली सम्हाल्ने ग्यारी पहिलो विदेशी प्रशिक्षक समेत हुनेछन् ।
एएफसी महिला एसियन कप २०२२ अन्तर्गत छनोट खेल खेल्न गइरहेको नेपालले सोही प्रतियोगिताको लागि यो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न गइरहेको हो । बंगलादेशविरुद्ध नेपालले दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ । महिला एसियन कपको छनोट खेल खेल्न अर्को साता उज्बेकिस्तान प्रस्थान गर्न लागेको महिला टोलीकोलागि बंगलादेशविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल महत्वपूर्ण हुनेछ ।
महिला एसियन कप छनोट अन्तर्गत नेपालले समूह एफमा दुई बलिया टोली फिलिपिन्स र हङकङको सामना गर्दैछ । उज्बेकिस्तानको जेएआर स्टेडियममा नेपालले असोज २ (सेप्टेम्बर १८) मा फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने हङकङ र नेपालबीचको खेल असोज ५ (सेप्टेम्बर २१) मा खेलिने तालिका रहेको छ ।
नेपाली महिला टोलीले सन् २०१९ को १३ औं साग पश्चात् पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय खेल खेल्न गइरहेको छ । नेपाल र बंगलादेशबीचको खेल साँझ ५:३० बजे सुरु हुनेछ । त्यस्तै यी दुईबीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आईतवार खेलिने छ ।
सन्दीप एकदिवसीय वरीयतामा, कति औं स्थानमा ?
कुशल र रोहित चम्किँएपछि अमेरिका नेपालसँग पराजित
कस्तो छ रोनाल्डोको खानपान शैली ?
पपुवा न्युगिनीविरुद्ध नेपालको संघर्षपूर्ण जित
दुवै हात नभएका खेलाडीले जिते कीर्तिमानसहित चार स्वर्ण
नेपालले आज भारतसँग मैत्रिपूर्ण फुटबल खेल्दै, यस्तो छ इतिहास